Man United Oo Si Rasmi Ah Ugu Guuldareysatay Saxiixa Jack Grealish Ka Dib Talaabo Lama Filaan Ah Uu Qaaday – Laacibnet.net
Man United Oo Si Rasmi Ah Ugu Guuldareysatay Saxiixa Jack Grealish Ka Dib Talaabo Lama Filaan Ah Uu Qaaday
Jack Grealish ayaa soo gabagabeeyay muddo bilooyin ah oo lala xiriirinayay kooxda Manchester United isagoo qandaraas waqti dheer ah saxiixay islamarkaana sii joogaya kooxda Aston Villa.
24 jirkaan ayaa qalinka ku duugay heshiis shan sannadood ah oo uu isbuucii ku qaadanayo 140 kun ginni isagoo soo afjaray wararkii xagaagan oo dhan la xiriirinayay Man United.
Grealish ayaa hogaamiye ka ahaa Aston Villa xilli ciyaareedkii la soo dhaafay iyadoo kooxda ay badbaaday maalintii ugu danbeysay ee xilli ciyaareedka ka dib barbaro 1-1 ay la galeen West Ham iyadoo kabtankooda uu dhaliyay goolkii ku sii hayay Premier League.
Ole Gunnar Solskjaer ayaa u calaamadeystay Grealish bartilmaameed isagoo la dhacay qaab ciyaareed xiddiga khadka dhexe iyo boosaska badan ee uu ka dheeli karo, waxaana si gaar ah u soo jiitay inuu hogaamiye ka ahaa badbaadada Aston Villa isagoo dusha saartay cadaadiskii saarnaa kooxda.
Si kastaba, Man United ayaa ka cagajiideysay inay Grealish ka bixiso lacag ka badan 50 milyan ginni madaama xiddiga Borussia Dortmund Jadon Sancho uu weli yahay bartilmaameedkooda koowaad.
Dhanka kale, Aston Villa ayaa u muuqata mid dooneysa inay maalgashi isku sameyso xagaagan iyadoo Grealish laga iibiyay aragtida ah in milkiilayaasha kooxda ay doonayaan inay hurdada ka toosiyaan kooxdaan magaca weyn ku leh Ingariiska.
“Waan ku faraxsanahay inaan mustaqbalkeyga u hibeeyay Aston Villa. Waa kooxdeyda, waa gurigeyga, waan ku faraxsanahay halkaan” ayuu yiri xiddiga Ingariiska.
“Milkiilayaasha waxay ii cadeeyeen sida uu hamogooda yahay iyo sida ay u doonayaan inay u dhisaan Aston Villa. Waqtiyo farxad leh ayaa inaga horeeya, waana ku faraxsanahay inaan qeyb ka ahay.”